ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ ကိုရီးယား သာသနာပြု (၂) ~ pyidawoo
5:32 PM Pyidawoo No comments
... ၁၉-၄-၂၀၀၂ မှတ်မှတ်ရရ ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုရီးယားကို ကြွတဲ့နေ.။ ထုံးစံအတိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဆိုတော့ အရေးတယူလုပ်ပြီး ဆက်စပ်နေတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးက လိုက်ပို.ချင်ကြတယ်။ ဦးစန္ဒိမာ(ရေး- ယခု သီရိလင်္ကာ) ဦးနန္ဒဓဇ၊ မယ်တော်ကြီးနဲ. ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ အမနှစ်ယောက်၊ ဧကမ္ဘာဆေးတိုက် ဦအောင်ကိုကို ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်းနဲ. ကိုရီးယား စကားပြန် ဦးမြင့်ဟန်တို. ညီအကိုတတွေ လေဆိပ်ကို လိုက်ပို.ကြပါတယ်။ မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြပေါ့လေ။ အခုတော့လည်း အိမ်ဦးနဲ.ကြမ်းပြင်ဆိုတာလို ကြွနေတော့ တစ်ခါတစ်ခါ ဘယ်သူမှတောင် မပါတော့ဘူး။ လေဆိပ်ကို ကားမောင်းပို.တဲ့ ကျောင်းက ကျောင်းသာလေးနဲ. ၂ယောက်ထဲ။
...ပထမဆုံး အကြိမ်တုန်းက လိုက်ပို.ရင်း အထဲဝင်ခါနီး မယ်တော်ကြီးက “သာသနာ ပြုနိူင်တဲ့ ရဟန်းကောင်း ရဟန်းမြတ် အာဇာနည် ဖြစ်ပါစေဘုရား”တဲ့။ ဘုန်းကြီးက ပြုံးမိတယ်။ မိခင် ဆိုတာကတော့ သားသမီးအပေါ်မှာ ဒီလိုပဲ ထင်တစ်လုံးနဲ. မဟုတ်လား။ အထင် ကြီးတာလား။ သိပ်မျှော်လင့်တယ်လို. ပြောရမလား။ လူရှေ.သူရှေ.ဆိုတော့ ရှက်တောင်ရှက်မိ သေးတယ်။ အမှတ်တရ တစ်ခုကတော့ လေယာဉ်ပေါ်တက် နေရာယူပြီး မကြာ ခင်မှာ ဘုန်းကြီး အင်မတန် ကြည်ညိုလေးစားရပါတဲ့ သဒ္ဓမ္မရံသီ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကြွလာတာတွေ.ရပါတယ်။ လက္ခဏာတွေ ဗေဒင်တွေ အတိတ်နမိတ်တွေ မယုံဘူးဆိုပေမယ့် မယ်တော်ကြီးရဲ. ဆုတောင်း စကားနဲ. သိပ်ကာလမခြားခင် ပြည်ပသာသနာပြု ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ. ဆုံရတာကိုပဲ နမိတ်ကောင်းလားလို. အားကျစိတ်နဲ. မဝံ့မရဲတွေးမိသေးတယ်။ မတ်တပ်ရပ် လက်အုပ်ချီ အရို အသေပေးဖူးမျှော်ရင်း မေးလျှောက် ကြည့်တော့ ထိုင်းမှာ တရားစခန်းရှိလို. တရားဟော တရားပြ ကြွတာတဲ့။ ထိုင်ခုံကြည့်လိုက်တော့ ဘုန်းကြီးရဲ. နောက်တည့်တည့်က ခုံဖြစ်နေလို. ထိုင်သာ ထိုင်နေရတယ် စိတ်ထဲက မသက်မသာနဲ.။
ပြည်ပထွက်တော့မှပဲ ဘုန်းကြီးတို. ပထမဆုံး အကြိမ်အနေနဲ. လေယာဉ်စစီးဖူးတာပါ။ ပြည်တွင်းမှာ တစ်ခါမှ မစီးဖူးပါ။ ရန်ကုန် မန္တလေး မြန်မာ့လေကြောင်း (ဂျက်)လေယာဉ်စီးခ ၉၀၀ကျပ် ကျော်ကျော်နဲ. ပြေးနေတဲ့အချိန် စီးမယ်ဆိုရင် ဘုန်းကြီးတွေအတွက် လက်မှတ်က သိပ်မခက်ပါဘူး။ ၈၈ အရေးအခင်းနောက်ပိုင်းအထိကိုပဲ ဆရာဘုန်းကြီးအတွက် မုံရွာကနေ မန္တလေးကို သွားပြီး မကြာခဏ လက်မှတ် ဝယ်ပေးခဲ့ရဖူးပါတယ်။ လူတွေဆိုရင်တော့ အစိုးရ ယန္တရား ထုံးစံအတိုင်း အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည် မဟုတ်ရင် မှောင်ခိုတွေ ချောင်ခိုတွေနဲ.မှ ရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိန်းကြီးခန်းကြီးနိူင်လွန်းတယ် ခံစားမိလို. မစီးဖြစ်ခဲ့ပါ။ S.Eဆိုတဲ့ အမြန် ရထားပေါ်စက ရထားခ၃၀၀ကျော်နဲ. စီးဖြစ်တာတောင် စိတ်ထဲက သိပ်မလုံဘူး။ သာသနာ့ဘောင် ရောက်တယ်ဆိုကတည်းက ခြိုးခြံရောင့်ရဲမှု ကျိုးနွံနှိမ့်ချမှုတွေကိုချည်းပဲ သင်ယူခဲ့ရတာကိုး။ သိပ်ပြီး အကောင်း ကြိုက်နေတာ ဇိမ်ခံချင်နေတာကိုက ရဟန်းကောင်း မပီသတာ မဟုတ်လား။
ပထမဆုံးအကြိမ် ပြည်ပခရီး TG-306 လား။ ဘန်ကောက်မှာ ထရန်စစ်။ လေယာဉ် ပထမဆုံးအကြိမ် စီးဖူးတာဆိုပေမယ့် သူငယ်တန်းကနေ ဆယ်တန်းအထိ သင်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာရဲ. ကျေးဇူးကြောင့် ဘာအခက်အခဲမှမရှိသလို အမှားအယွင်းလည်း တစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါ။ ငယ်ငယ်က တစိုက်မတ်မတ် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေကလည်း နိူင်ငံခြားဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် သိပ်မစိမ်းသလိုပဲ ခံစားမိစေတယ် ထင်တာပဲ။ ကိုယ့်နိူင်ငံမှာ မမြင်ဖူး မကြားဖူး မကြုံဖူးပေမယ့် စာတွေ.ရှိတော့ အကျွမ်းဝင်လွယ်တာပေါ့။
၂၀-၄-၂၀၀၂ မှတ်မှတ်ရရ ကိုရီးယားကို ပထမဆုံးအကြိမ် စရောက်တဲ့နေ.။ အင်ချုံးနိူင်ငံတကာလေဆိပ် စဖွင့်တဲ့နှစ်ပဲထင်ပါတယ်။ အသေအချာတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ ဆင်းရဲတဲ့ နိူင်ငံသားတွေ ချမ်းသာတဲ့နိူင်ငံကို သွားတဲ့အခါတိုင်း ခံစားရတဲ့ အထင်သေးခံရမှုနဲ. မယုံကြည်ခံရမှုကတော့ မလွဲမရှောင်သာ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိတော့ ကြုံရသေးတာပါပဲ။ ပင့်စာကိုတောင်းပြီး ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ပင့်တဲ့ဖူဆန်းကဘုန်းကြီးနဲ. လိုင်းပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် တွေ.တဲ့အပြင် လာကြိုတဲ့ ဆိုးလ်က ကလေးမလေးကလည်း လေဆိပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို ဖုန်းတစ်ဂွမ်ဂွမ်ဆက်နေတော့ သိပ်မရစ်ပါဘူး။ သူက အမေရိကန်မှာ ၂နှစ်နေခဲ့ဖူးတော့ ချမ်းသာတဲ့ နိူ်င်ငံတွေရဲ. ဆင်းရဲသားနိူင်ငံတွေအပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားနဲ. အထာကိုသိသတဲ့။ ဒါကြောင့် ဒီဘုန်းကြီး ဘက်ဂရောင်း အခိုင်အမာရှိတယ်ဆိုတာ သိအောင်လို. လေယာဉ်မဆိုက်ခင် ကတည်းက ဖုန်းတစ်ဂွမ်ဂွမ် ဆက်နေတာတဲ့။ ဗဟုသုတ အကြားအမြင် အတွေ.အကြုံ များခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးမဟုတ်လား။ သူမရဲ. ဗဟုသုတကြောင့် ဘုန်းကြီးမှာ ချမ်းသာပွားခဲ့ ရပါတယ်။ [စကားချပ်။။ ဒီကလေးမက တော်တော်ကို ထက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဘုန်းကြီး အပြန်မှာ မြန်မာပြည်ကို လိုက်လာပြီး ဘုန်းကြီးရဲ.စန်းမြသီတာ မဟာစည်ရိပ်သာမှာ တရား အားထုတ်ပါတယ်။ ကျောင်းက စခန်းပွဲပြီးသွားတော့ သူ.ကို သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာမှာ ဘုန်းကြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လိုက်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူအပြန်မှာ အခု လှည်းကူး ဓမ္မမာမက ဆရာတော်ဦးဣန္ဒက (အဲဒီအချိန်က အင်းတိုင် သဒ္ဓမ္မရံသီ နာယက)ကလည်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုရီးယားကိုကြွမှာ အဖေါ်မရှိတာနဲ. သူနဲ. အတူကြွဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာ မြန်မာပြည်လိုပဲ ဘုန်းကြီးဦးဣန္ဒကကို ကားလေး တစ်စီးနဲ. သီးသန်. ပို.ပေးပါလို. ထိုင်းလေကြောင်းကို သွားအရေးဆိုတာ ပို.ပေးသတဲ့။]
ပစ္စည်းရွေးပြီး ထွက်လာတော့ လေဆိပ် meeting point မှာ စောင့်နေတဲ့ ကလေးမက Warmly welcome to Korea. Forgive me Sir, if I did something wrong. I’m not sure how to serveaBuddhist monk especially like you;aforeigner monk. တွေ.တွေ.ချင်း အဲဒီကလေးမက ပန်းလေးတစ်ပွင့် လှမ်းပေးရင်း (ကပ်လှူရင်း) ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ။ ကိုရီးယား ရောက်ပြီးမှ ပထမဆုံးအကြိမ် မြင်ဖူးတာတွေထဲက အခုအချိန်အထိ မှတ်မှတ်ရရရှိနေတာကတော့ ပထမဆုံး အလှူခံရတဲ့ပန်း။ အစိမ်းရောင် နှင်းဆီ။ တစ်ပွင့်ထဲ။ ဒီ့အရင်က မမြင်ခဲ့ဖူးပါ။